Duqeymaha Israel oo weli ku socda Qaza iyo Xamas oo Gantaallo ku jawaabaysa | Aftahan News
Duqeymaha Israel oo weli ku socda Qaza iyo Xamas oo Gantaallo ku jawaabaysa
Qaza (Aftahannews)- Ciidamada Israel, ayaa lasoo dhoobay xuduudda Gaza, xilli ay weli duqeyn ku socoto magaalada, halka ururka Xamas ay iyagana gantaallo ku garaacayaan Israel, iyada oo xaaladda ay kasii dareyso.
Ugu yaraan 83 qof, ayaa lagu dilay Gaza tan iyo markii ay billowdeen duqeymaha Israel Isniintii, sida ay sheegeen kooxaha caafimaadka, iyada oo isbitaallada oo markii horeba la tiicayay bukaanada COVID-19 la geeyay dhaawacyo.
“Waxaan wajaheynaa Israel iyo COVID-19. Waxaan dhexda uga jirnaa laba cadow,” waxaa sidaas yidhi Asad Karam oo ah 20 jir ka shaqeeya dhismooyinka, isaga oo dhinaca taagan waddo ay waxyeeleeyeen duqeymaya Israel.
Toddoba qof, ayaa ku geeriyootay Israel tan iyo markii ay billowdeen gantaallada Xamas, sida ay sheegeen militariga Israel.
“Israel oo dhan waxaa ku socda weerar. Waxaa xaalad aad cabsi u leh in lagu sugnaado,” waxaa sidaas yidhi Margo Aronovic oo ah 26 jir arday ah oo ku sugan Tel Aviv.
Israel, ayaa ciidamo dagaal ku diyaarisay xuduudda Gaza, waxayna ku sugan tahay “marxalado kala duwan oo ay isugu diyaarineyso howlgal dhulka ah,” sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga.